Akuyena wonke umntu owaziyo ukuba i-tea ayiyona nje isiphuzo esimnandi, isiphuzo esimnandi, kodwa kunye nemveliso yokuziqhelisa yemvelaphi yemvelo efanelekileyo nawuphi na uhlobo lwekhumba kwaye ayibangeli ukucasuka kunye nokunyuka. Yongezwa ekubunjweni kwama-creams ahlukeneyo, i-lotions, i-masks, i-tonics kunye nokuphucula ukusebenza kwabo. Abasetyhini abaninzi basebenzisa itiye njengemveliso yokuziqhenqa, kwaye kukho ezininzi iindlela zokupheka kubantu kunye nokudibanisa kwayo.
I-Belychi iyakwazi ukuhlaziywa nokuphucula isikhumba, kunye nombala wayo kwaye izaliswe ngamavithamini ahlukahlukeneyo. Ezi zonyango zifanelekile nasiphi na isikhumba, nokuba sisicatshulwa kunye nesifo.
Kubalulekile ukunyanzelisa i-press ekhethekileyo nganye ngeveki ukusuka kwi-oat flakes kunye namaqabunga etiyi. Iiflegi kunye netiyi kufuneka zithanjwe ngamanzi abilayo, emva kwemizuzu elineshumi, gxobhoza amanzi uze wongeze igramu ezingama-20 zejisi lemon. Faka kwaye usebenzise kwi-gauze. Emva koko sisebenzise umgca wesigxina imizuzu engama-20 ebusweni, uze uhlambe.
Oku kuncedo kangangokuba uyakwazi ukususa i-toxins ukusuka emzimbeni, ukulwa kunye ne-sprays, i-pores edibeneyo kunye ne-greasy ekhanyayo ebusweni, kwaye iphinda ihlaziye ilusu, iyaba matte kwaye idume. Ngako oko, kufuneka uhlambe rhoqo ubuso ngala maqabunga okanye kabini ngeveki ukwenza iimaski.
Kucetyiswa ukuba uthathe inxalenye yesithathu yebhanana, ibethe kwi-blender ukwenza i-gruel, yongeza i-spoonful ye-ti eqinile, i-yolk yeqanda, ioli yeoli. Awukwazi ukubeka umxube ebusweni bakho kuba iya kuba yinkonzo kakhulu, ngoko thabatha ipotton kwaye usebenzise imaski elukhumbeni. Endaweni yoko, ungathabatha i-napkin napkin ngomxube kwaye usebenzise ebusweni iminyaka engamashumi amabini. Gcoba ngamanzi uze ufake isicelo sokunyusa amanzi.
I-Suchochia isusa ukuvuvukala kwaye iyomeleza iinqanawa, ngoko yongezwa kwimveliso eyahlukeneyo yezityalo kunye nombono wendawo.
Ukuba unengxaki yesikhumba, ngoko unokwenza itekisi ekhethekileyo kwiitayi ezimnyama. Ukwenza oku, kufuneka uthathe isahlulo semon ngeglasi yeti eqinile kwaye ungeze ityuwa encinane. Gcoba, uthele kwi-mold molds, ubhafele uze uhlabe ubuso rhoqo ekuseni.
Ukongeza, le tey isetyenziswe kakuhle kwizonyiso zokunyamekelwa kweenwele, isetyenziselwa ukuhlanza. Kodwa ifanelwe kuphela inwele ezimnyama kunye ne-brunette. Ukuze ulondoloze umbala weenwele ezinemibala, yenze ibe mhlophe kwaye iphilile, kufuneka usebenzise itiye emnyama, kwaye ukuba unemibala yakho, lo mququzeleli wezinwele uya kuqinisa kwaye uzinze. Ukwenza oku, kufuneka usebenzise okanye uthayibhile itiye ngemaski oyaziyo okanye ngaphandle kwayo. Ngengqiqo yakho.
Iimpawu ze-Tonic, ezilungiselelwe kwizithako zendalo, ziyasinceda kakhulu, kuba zingenayo i-chemistry, kwaye zenza izimonyo ezinjalo ekhaya zilula kakhulu.
Oku kuya kunceda ukugcina ubude bude kwaye kuthintele ezininzi izifo zamehlo.
Emva kokumisa, ngaphambi kokulala, yenza ibhotile. Ukwenza oku, udinga i-parsley okanye i-chamomile ne-tea infusion. Kwikomiti encinci yeplastiki, yongeza oku ku-infusion uze uyicinezele kweso. Ngoku vula amaxesha angama-10 ukuya ku-15 uze uvale amehlo akho, yenza isyhula sisetyhula amaxesha amaninzi. Unokwenza ngeiglasi ezimbini ngelo xesha okanye kwakhona.
Ukunyanzeliswa kweeyi, i-mint, i-chamomile kunye ne-parsley kuya kuba nempembelelo yokulwa nokuvuvukala nokuthoba. Udinga i-1 i-spoonful yeeyi kunye nesiqingatha se-spoonful ye-herb brew kwaye uvumele ukupholisa kwindawo yokushisa. Njalo le zihlandlo 4-5. Xa usuqedile inkqubo, sebenzisa i-cotton buds ejikiweyo kumanzi abandayo acocekileyo ngomzuzu nje. Emva koko, sebenzisa ukhenkco olusisondlo oluncinci esikhumbeni.
Ukuqinisekisa ukuba ulusu olusondeleyo kwamehlo luhlala luhlambulukile, lususe kusasa kwaye kusihlwa kunye ne-ice cubes ukusuka kwi-decoction yeyinti kunye neyeyi.
Ukuba uhlala usebenzisa imali kunye nokudibanisa itiye, ngokukhawuleza isikhumba sakho siya kufikelela kwindawo efanelekileyo.
Lungisa isitshizi esekelwe kwihayi ukucoca ulusu. Iheyi oye wayenayo, uyomise kwaye uyithumele kwijeli yeglasi. Ngaphambi kokuba uhlambuluke, kufuneka uhlambe umbhebhe ebusweni kwi-mint, iparsley, calendula kunye neengqondi. Ezi mifuno zityhala amanzi abilayo epanini, gubungela intloko ngehawula kwaye uphefumle phezu kwesitya malunga nemizuzu eyi-10. Ukuba isikhumba sinamanqatha, emva kwemizuzu engama-20. I-Daleuskuyu i-brew exutywe kunye ne-foam yokucafa. Faka isicelo sesetyhula kwaye, ngaphandle kokuchukumisa umlomo wakho kunye namehlo, gubungela encinci. Geza ngamanzi afudumele kwaye usebenzise ukhilimu. Ukuba unesikhumba esomileyo kakhulu, ngoko kwi-scrub kufuneka udibanise i-oyile yeoli.
Ukucoca ulusu, unokwenza ulungelelaniso lwe-tea eluhlaza nolwandle ityuwa. Ukuphalaza uthele amanzi athile abilayo (1 inkomishi) kwaye uhlambele imizuzu emi-5. Xa iphosa, yongeza i-spoonful yolwandle yeryuwa. Ngaphambi kwenkqubo, qiniseka ukuba ugcoba ubuso kunye neoli yeoli, kwaye emva kwentshukumo yeesetyhula, thinta i-lotion kwesikhumba. Kwakhona, qiniseka ukuba akukho nto ihamba kunye neenyawo. Geza uze udibanise ubuso kunye nekhilimu.
Ikhumba elibi kakhulu liya kunceda utyando oluvela kwi-tea eluhlaza. Esipokeni, ubilise i-100 ml yamanzi acocekileyo, faka i-teonful yeeyi, cima kwaye ugxininise isiqingatha seyure. Ekupheleni kwexesha, yongeza amaconsi ama-10 e juisi. Hlanza ubuso kusasa nangokuhlwa.
I-Lotion yeeti ebomvu iya kunceda ngesikhumba esomileyo. Kwiglasi yamanzi abilayo uthele i-teonful yetiyi ebomvu, linda imizuzu emihlanu kunye noxinzelelo. Kwakhona, cwangcisa ngokuhlukileyo umhluzi weengcambu ezivela kwi-mint, i-petals ye-tea rose kunye ne-lemon balm. Ukugxininisa isiqingatha seyure, ngoko ke unzima. Emva koko qha gazela zombini i-broths uze usule ubuso bakho kabini ngemini. Kufuneka emva kwesicelo ngasinye ukucoca ngobuso ngekhilimu. Le ntsilelo efrijini ayifanele igcinwe iintsuku ezi-4 kwaye ngaphambi kokuba nganye isebenzise ukuyifudumala.
Umask of tea eluhlaza ulungele nayiphi na uhlobo lolusu. Isiqingatha setiyi enkulu yamagqabi athululela i-½ tbsp. amanzi abilayo. Makhe kuthathe imizuzu emi-5, uze ungeze isiqingatha seglasi yobisi olufudumeleyo. Emva kwemizuzu emibili, gcoba ngokucokisekileyo kwaye uthele umhluzi olungiselelwe kwi-2 i-spoonfuls ye-oatmeal encinci. Sebenzisa le mxube kabini ngeveki imizuzu engama-20. Musa ukulibala ukusebenzisa emva kratri yonyango.
Ukwenza imaski ngokubhekiselele kumaphuzu amnyama uzakufuna isiqingatha se-spoonful yetiyi eluhlaza, imvubelo eninzi, i-spoonful ye-oat flakes kunye ne-spoonful of the color of lime. Leap kunye netiyi uthele i-½ tbsp. amanzi abilayo, emva kwemizuzu eyi-15 yongeza iiflegi kunye nembiliso. Jongana nobuso kwaye usebenzise imaski imitha engamashumi amabini ebusweni. Geza, ungasebenzisi ukhilimu. I-mask ingenziwa nganye iintsuku ezintathu. Emva kweentsuku ezi-5, ulusu luya kuhlambuluka kwaye lukhulu.
I-mask yekrimu, ikhukhamba kunye neoli yetiyi iya kuhambelana nekhanda elikhulileyo. Uyakusindisa kwimibono emihle. Thatha i-spoonful ye-cream cream, ehlulwe kwikhukhamba ye-grater kunye namaconsi amahlanu eoli ye-tea. Gcina kakuhle kwaye usebenzise ebusweni imizuzu engama-20. Geza uze usule isikhumba se-cubic mix from decoction of herbs: i-chamomile, melissa, i-sage kunye ne-mint. Yenza imaski zonke iintsuku ezine.
Iimpawu zezilumkiso zezandla kunye nezipikili
Yonke imaski kufuneka ifakwe ezandleni, igqoke iiglavu zepotton, ize uyihlambe ekuseni. Ezi zixhobo ziza kukhusela izandla zakho kwimiphumo yemichiza yasemakhaya kunye neemeko zemozulu.
Ukuba izandla ziphelile, phinda upheke ii-litate ezinkulu, phakamisa kwaye wongeze indebe yesiqingatha yetiyi eluhlaza. Hlanganisa kwaye usebenzise zonke iintsuku ezintathu.
Kuba isikhumba esiqingqiweyo siya kunceda imaski yetiyi emnyama kunye ne-oatmeal. Iipuni ezi-5 zee-clove kufuneka zigalelwe zibe yi-powder kwaye zithululelwe ngeti eqinile ukuze zenze i-gruel ye-liquid. Gubha elukhumbeni lwezandla zakho uze ushiye ubusuku bonke.
Ukunyamekela ulusu nge-acne
Unokunyamekela njani isikhumba sakho emva kweminyaka engama-30?
Iitatayi, yiziphi iimpawu umntu analo njengeyeza
I-fistula ebusweni yabantwana
UkuSasaza kweNdabuko yaseThai
Unyango lwe-Hair by mesotherapy
Kutheni ukuba isikhumba sibuhlungu xa sichukumisiweyo?